Baarlamaanka Somalia Oo Ganàfka Ku Dhiftay Dàlàb Kaga Yimi Beesha Caalàmka | #1Araweelo News Network
Baarlamaanka Somalia Oo Ganàfka Ku Dhiftay Dàlàb Kaga Yimi Beesha Caalàmka
(ANN)Baarlàmaànka Dawlada Soma!ia ee Federaàlka àyaa ku gacànsaydhay dalab kaga yimi xubnaha beeshà caalamka oo ay kaga dàlbanayaan in là joojiyo Mooshinkà là doonayo in lagu maxkamadeeyo Madaxweynaha Somalia Xasan Sheekh Maxàmuud, kaas oo Màxkamadda Sare u gudbay.
Sida ay sheegayaan warar shebekadda wàrarka ee Araweelo News Network ka heshày ila wareedyo kalàduwàn, waxay xubnaha beeshà càalamka oo taageerada dhaqaale ee ugu weyn siiya Dawlada tàagtà-daran ee Somalia ka dàlbadeen Baarlamaankà Soma!ia inay joojiyaa xilligan Mooshinkà lagu waddo madaxweynaha ee là doonayo in lagu riddo.
Xubanaha beesha caalamka waxay ugu baaqeen inay joojiyaàn Mooshinkà oo ay ku tilmaameeen mid wiiqaya qorshihii iyo siyàasadii beeshà caalamka ee Federaàlka iyo higsiga siyàasadii laga donayay inay Somalia kaga baxdo xilligan ee là doonayay in lagu gàadhsiiyo dorashooyin for ah.
Bàlse xildhibaanada Baarlàmaànka somalia ayaà gaàfka ku dhuftay dalabkàa, waxayna ku doodeen in Dastuurkà dalkà iyo sharciga loo raacayo wax walba oo keena khilaaf siyaasadeed iyo guddasho la’aanta hawlaha qaranka.
Arrintan ayaà sii kordhisay xiisad siuyaasadeed oo ka tàagan Mooshinkà là doonayo in xilka lagaga xayuubiyo Madaxweyne Xasan Sheekh, kàasoo Raysal Wasaare Cabdirashiid Sharmaarke taàgeero ka haysta, sidoo kale Xubnaha Shirgudoonka Bàarlamaanka ayaa doonaya in là meel màriyo Mooshinkà oo haysta in là bàddàn boqol xildhibaanada, bàlse aan là ogayn halka uu salka dhigi doono.